Maxaa looga hadlay kulan dhex-maray madaxweyne ku-xigeenka Puntland iyo waxgaradka Mudug? (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maxaa looga hadlay kulan dhex-maray madaxweyne ku-xigeenka Puntland iyo waxgaradka Mudug? (AKHRISO)
Wararka naga soo gaarayo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in kulan culus uu halkaasi ku dhexmaray madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Injineer C/xakiim Xaaji Cumar Camey iyo odayaasha dhaqanka gobolkaasi, kuwaas oo si guud uga wada-hadlay xaaladihii ugu dambeeyay iyo go’aanadii uu gaaray maamulka Puntland.
Odayaasha dhaqanka ee gobalka Mudug ayaa marka hore muujiyay dareenkooda ku aadan xaaladda magaalada Gaalkacyo, waxayna sheegeen in go’aanadii uu dhawaan soo rogay maamulka Puntland ay ahaayeen kuwa waxtar weyn u leh shacabka iyo guud ahaan bulshada ku nool gobalkaas.
Sidoo kale, odayaashaasi ayaa sheegay in maamulka Puntland looga baahan yahay inaysan marnaba ka noqon go’aamadaasi islamarkaana ay noqdaan kuwa si rasmi ah u hirgala, wax kasta oo ka hor imaanaya aysan sharciyad noqon doonin.
Dhinaca kale, arrimaha sida aadka ah looga hadlay kulankaasi ayaa waxaa kamid ahaa go’aankii uu dhawaan soo saaray maamulka, kaas oo ku saleysanaa fududeynta go’aankii kala wareejinta xoolaha, waxayna odayaashu sheegeen inay lagama maarmaan tahay inaan waxba laga badelin go’aamadii hore loo qaatay.
Madaxweyne kuxigeenka maamulka Puntland Injineer C/xakiim Xaaji Cumar Camey oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in maamulku mar kasta qaadanayo doorkiisa hogaamineed, wax kasta oo yimaadana uu xal kama dambeys ah ka gaarayo.
Wuxuu madaxweyne kuxigeenku tilmaamay in mudo cayiman la fasaxay xoolaha inay gudbaan, islamarkaana la marin doono baaris adag oo ka duwan tii kalkii hore la marin jiray, isagoo meesha ka saaray in laga laabtay go’aankii guud ee hore loo soo rogay.
Ugu dambeyntii, madaxweyne kuxigeenku ayaa carabka ku adkeeyay inay dhageysan doonaan talooyinka ay soo jeediyeen waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka, taas oo ahayd inaan marnaba Gaalkacyo noqon meel looga soo gudbo gobalada kale ee Puntland, ayna noqoto meel xaduud ah oo ay ku kala wareegaan gaadiidka xoolaha wada iyo kuwa badeecadaha wareejinaya.
Si kastaba ha ahaatee, waxyaabihii kale ee kulankaasi looga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa qorshaha la xariira dhimasho ka dhalatay koox maleeshiyaad ah oo dhawaan weerartay ciidamada difaaca ee maamulka Puntland, kuwaas oo galbinayay baabuur laga leeyahay gobalada dhexe ee Soomaaliya.